Tilmaamayaasha kumbuyuutarka ee ugu waxqabadka badan Sawirka qayb II | Abuurista khadka tooska ah
Fran Marin | | muujiye, Tricks
Qeybtii hore waxaan ku sameynay iskusoo koobid kooban toobiyaha kumbuyuutarka ee ugu wax ku oolka badan. Qeybintaan labaad, waxaan kugu siineynaa liis amarro ah oo si siman waxtar u noqon kara, in kastoo taasi ay ku xirnaan doonto habka aan u shaqeyno iyo habka naqshadeeye kasta u raaco. Haddii aad hayso wax talo ama tusaale ah, ha ka waaban, Aan ogaano!
Amarada waxaa loo kala saaraa qaybaha soo socda ama xulashooyinka:
Deji barta asalka markaad ka shaqeyneyso wareegga, milicsiga cabirka ama qalabka qallooca: Alt / Xulashada + Guji.
Nuqul oo beddel xulashada markaad la shaqeyneyso qalabka wareegga, miisaanka, muraayadda, ama qalabka qallooca: Alt / Xulasho + Jiidid
Beddel ujeeddooyinka marka aan ku shaqeyno wareeg, cabbir, milicsi ama dhalanrog: > + Jiid
Ku shaqee qoraalka:
Dhaqdhaqaaqa hal erey ugu wareeji bidix ama midig: Ctrl / Cmd + Midig / Fallaarta Bidix.
Koorsooyinka kor ugu qaad hoos / hoos hal cutub: Ctrl / Cmd + Kor / Hoos Fallaadh.
Saf sadarka bidix, midig ama bartamaha: Ctrl / Cmd + Wareejin + L / R / C.
Xaqiiji cutubka: Ctrl / Cmd + J
Kordhi ama yaree cabirka qoraalka: Ctrl / Cmd + Shift +, (comma) /. (dhibic).
Kordhinta / hoos udhaca khadka: Alt / Xulashada + Kor / Hoos Arrow (qoraalka toosan) iyo Xuquuqda / bidix Arrow (qoraalka jiifka).
Muuji / qari dhammaan baalayaasha: Tab
Muuji / qari dhammaan baararka marka laga reebo aaladda iyo guddiga xakamaynta: Wareeji + Tab.
Xulo noocyo kala duwan oo Ficillo ah, Burush, Lakabyo, Xiriiro, Noocyo, ama Saacado: Wareeji + Guji.
Furashada Kala hadal xulashada burushka: Laba jeer guji buraashka.
Burush nuqul: Burush u riix badhanka "buraashka cusub".
Guddi midab leh:
Beddel buuxinta ama istaroogga oo aan firfircooneyn: Alt / Xulashada + Guji bar midabka.
Beddel qaabka midabka: Shift + Guji bar midabka.
Midab nuqul ah ayaa istaaga: Alt / Xulasho + Jiidid
Midab ku dabool joogsiga midabka firfircoon: Alt / Xulashada + Guji boodhka ku yaal guddiyada dhufaysyada.
Xulo dhammaan walxaha lakabka: Alt / Xulashada + dhagsii magaca lakabka.
Muuji ama qari dhammaan lakabyada marka laga reebo midka la xushay: Alt / Xulashada + Guji astaanta isha.
Quful ama ka fur dhammaan lakabyada kale: Alt / Xulashada + Guji astaanta qufulka.
Nadiifi maaskaro madoobaadka: Guji thumbnail lakabka + Shift.
Kordhinta / Hoos u dhig la'aanta 1% talaabooyinka: Guji dusha opacity + Fallaaraha Up / down.
Kordhinta / Hoos u dhig la'aanta 10% talaabooyinka: Shift + Guji qaybta madadaalada + Fallaaraha Up / down.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » muujiye » Gawaarida kumbuyuutarka ee ugu waxqabadka badan Sawirka qayb II
Waad salaaman tahay Fran Marin! Weydiin. Ma xasuusto sida ay ahayd in loogu daro darafyada qaababka kumbuyuutarka, tusaale ahaan waxaan qaadaa laba jibbaaran oo aan u beddelaa saddexagal ama geesoole anigoo taabanaya laba fure